Fear Street Part One: 1994 (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉၉၄ခုနှဈအမရေိကနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့မွို့လေးနှဈမွို့အကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီမွို့လေးနှဈမွို့ဟာ ဘေးခငျြးကပျရပျအနီးနားမယျရှိနပေမေဲ့ အခွအေနတှေကှောခွားလှပါတယျ။
ဆနျနီဗေးလျမွို့ဟာ သာယာဝပွောပွီး စီးပှားဖွဈသလောကျ ရှိတျဒီဆိုဒျမွို့ကတော့စုတျပွတျနုံခြာနပွေီး
ဒီကားဟာဆိုရငျ R.L. Stine ရဲ့ Best-Selling Fear Street Book Series ကို
အခွခေံရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး။Part -1(1994), Part – 2(1978), Part -3(1666)
ဆိုပွီး ၃ကားတှဲ တဈပတျခွားစီဆကျတိုကျထှကျလာမယျ့ Trilogy Event လညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Mia Mina ဖွဈပါတယျ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၉၄ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့လေးနှစ်မြို့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမြို့လေးနှစ်မြို့ဟာ ဘေးချင်းကပ်ရပ်အနီးနားမယ်ရှိနေပေမဲ့ အခြေအနေတွေကွာခြားလှပါတယ်။
ဆန်နီဗေးလ်မြို့ဟာ သာယာဝပြောပြီး စီးပွားဖြစ်သလောက် ရှိတ်ဒီဆိုဒ်မြို့ကတော့စုတ်ပြတ်နုံချာနေပြီး
ဒီကားဟာဆိုရင် R.L. Stine ရဲ့ Best-Selling Fear Street Book Series ကို
အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး။Part -1(1994), Part – 2(1978), Part -3(1666)
ဆိုပြီး ၃ကားတွဲ တစ်ပတ်ခြားစီဆက်တိုက်ထွက်လာမယ့် Trilogy Event လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Mia Mina ဖြစ်ပါတယ်
Option 1 teracloud.jp 501 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 501 MB SD (480p)